Jambarao na rotra
samedi, 31 octobre 2015 07:49
Antsohihy : Vokatra ny jambarao
Mitobaka ao an-tsenan’Antsohihy ny jambarao na rotra amin’izao fotoana izao. Midika izany fa tonga ny vanim-potoanan'ny fahavaratra.
Zaza handeha hianatra maty nofaohin’ny 4x4
Mahajanga : Zaza handeha hianatra maty nofaohin’ny 4x4
Hianatra no nivoahana ny trano, kinanjo fahatesana no nitsena an’ity zazalahy kely 8 taona. Nofaohin’ny fiara 4x4 izy raha niampita arabe niaraka tamin’ny namany teny amin’ny lalana Sotema Mahajanga, amin’ny lalam-pirenena faha-4 androany zoma, tamin’ny fiandohan’ny tolakandro teo. Fiara nirimorimo fandeha maika hanatitra mpianatra no fototry ny loza, hoy ireo nanatri-maso. Mafy ny dona, nipitika 10 metatra niala ilay fiara ilay zazalahy kely izay maty tsy tra-drano. Nipotsaka ny lohany ary tapaka ny tanany havanana. Zaza taizan-drenibeny ity niharan-doza ity, any an-dafy ny reniny. Tandremo ny sary ho an'izay mora tohina
vendredi, 30 octobre 2015 20:06
Tolagnaro : Tsena nandaniana vola amina miliara simba ampitoerana
Tsena iraisan’ny Kaominina maromaro (OPCI) any Tolagnaro izy ity, naorina ao amin’ny “Gare routière” Ampamakiambato ary vita tamin’ny taona 2007. Lehibe ny fotodrafitr'asa izay vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny Vondrona Eoropeana ary nandaniana vola amina miliara. Hatramin’izao anefa tsy nampiasaina ity tsena ity, hany ka misy mangalatra tsikelikely ny tafony.
Mpisoloky vola sandoka
vendredi, 30 octobre 2015 08:37
Mpanao vola sandoka : Tambazotra iray ravan'ny polisy tao Toamasina
Niainga tamin’ny fahatrarana vola 10,8 tapitrisa Ariary saika hamitahana mpamokatra jirofo tany Soanierana Ivongo ny fikarohana ireo tambazotra mpisoloky sady mpanao vola sandoka ary milaza ho mahay mampitombo vola ihany koa.
jeudi, 29 octobre 2015 19:57
Tolagnaro : Miaka-bidy ny hanin-kohanina
Mitaraina ny mponina fa tsy mitsaha-miaka-bidy ny hanin-kohanina. Tafakatra any amin'ny 500 Ar ny vary iray kapoaka, 1000 Ar ny iray toko amin’ny bageda na vomanga. Mirongatra ny vaky fasana sy hala-botry any ambanivolo.
mercredi, 28 octobre 2015 23:10
Mahajanga : Fito voarohirohy amin’ny fahaverezan’ny fitaovan’ny Kaominina
Tsy navelan’ny Ben’ny tanàna Andriantomanga Mokhtar Salim ny raharaha manodidina ny fahaverezana sy famotehana ireo fitaovan’ny Kaominina Mahajanga ambonivohitra satria tsy azo avela ho very ny fananam-bahoaka. Lasibatra tamin’izany tsiahivina ireo fiarabe fitaomana fako. Mivoatra ankehitriny ny raharaha, ka olona fito hatreto no voarohirohy. Miandry izay ho tohiny ny mponina manoloana io tranga io.
Mpitari-posy ahiana ho mpanendaka
mercredi, 28 octobre 2015 10:10
Tsiliva : Mpitari-posy ahiana ho mpanendaka amin’ny alina
Nosamborin’ny polisin’i Toamasina i Jean Metiste na i Tsiliva, mpitari-posy malaza, ahiana ho mpanendaka olona amin'ny alina. Maro ny fitarainana voarain’ny polisy fa misy mpitati-posy mitsikomba amin’ny jiolahy, manendaka amin’ny alina. Voatonona tamin’izany i Tsiliva. Voatondro ho mitazona fitaovam-piadiana ambalahana sy fanafody gasy ity farany. Tsy nahitana an’ireo anefa teny aminy tamin’ny fotoana nisamboran’ny polisy azy. Notazomin’ny polisy anaovana fahadihadiana izy, ary mitohy ny fikarohana ireo heverina ho mpiray tsikombakomba aminy.
Pierre Andrianantenaina, ankavanana amin'ny sary, nanatontosa ny sivana izay ho Ben'ny tanàna amin'ny anaran'ny Mapar.
mardi, 27 octobre 2015 08:49
Nodimandry i Pierre Andrianantenaina.
Tamin'ny roa ora maraina ny alatsinainy hifoha Talata no nodimandry tao antranony eny Ambolokandrina i Pierre Andrianantenaina. Fantatra tamin'ny tolona mavaivay izay nandraisany anjara hatrany na tamin'izy mbola lehiben'ny SECES mpampianatra mpikaroka teny amin'ny Polytechnique, i Piera Kely moa no nahalalan'ny maro azy fony izy nampianatra Beton armé, lehiben'Antoko Farimbona, nanana onjam-peo, mpitolona tamin'ny faha Hery velona, fototry ny tolona tamin'ny 2009, mpanolotsaina manokana tamin'ny tetezamita, ary mpikambana mavitrika tao amin'ny MAPAR.Mirary fihononana ho an'ny fianakaviana ny ekipan'ny Sobika iray manontolo.
lundi, 26 octobre 2015 13:22
Andohatapenaka: Miala any ny hery famoretana
Tonga vao maraina teny Andohatapenaka ny fitaovana vaventy nandrava ny fototr'ireo abatoir teo aloha.Nisy olona teo amn'ny dimapolo teo ireo mpomba an'i filoha teo aloha Ravalomanana no namaly ny antsony hiara hientana anakana izany fandravana izany. Maro anefa ireo Emoreg efa niantrana teny an-toerana ka nihemotra ireto mpanara-dia an'i Ravalomanana ireto.
Page 622 sur 638